Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण मन्त्री खतिवडाद्वारा 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२० प्रतिवेदन’ सार्वजनिक
मन्त्री खतिवडाद्वारा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२० प्रतिवेदन’ सार्वजनिक
८ श्रावण २०७७, बिहीबार १८:५३
काठमाडौँ, ८ साउन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२० प्रतिवेदन’ भर्चुअल सेमिनारमा सार्वजनिक गरेका छन ।
आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले सन् २०२१ (२०७७/७८)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मात्र २.१ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
तर, यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने रटान दोहोर्‍याए । विश्व बैंकले यसअघि नै २.१ प्रतिशतको वृद्धि हात पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटमा नै ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर न्यूनीकरणमा सरकारले ल्याएको प्याकेजहरुका कारण अर्थतन्त्र छिट्टै पुनरुत्थान हुने दावी गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (२०२०) मा भने विश्व बैंक र सरकारको अनुमान करिव नजिक नजिक देखिएको छ । उक्त आवमा सरकारले २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेकोमा विश्व बैंकले यस वर्ष १.८ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको छ ।